“လေးနှစ်တစ်ကြိမ်မှရောက်လာတဲ့နေ့ နံနက်ခင်းရဲ့ တောင်သမန်ကအလှ” | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Local Guides » “လေးနှစ်တစ်ကြိမ်မှရောက်လာတဲ့နေ့ နံနက်ခင်းရဲ့ တောင်သမန်ကအလှ”	15
Posted by ကိုပေါက်(မန္တလေး) on Mar 2, 2012 in Local Guides, Photography, Travel | 15 comments
1 ထွက်ပေါ်လာစ နေမင်း..........(ရှေးကတော့ အရှေ့ပြုဗ္ဗာမှထွက်ပြူလာစ ဖန်ဝါလ်နေမင်း လို့ရေးမှာနော်)
2 နည်းနည်းလေးအလင်းရင့်လာတဲ့အချိန်(ဒီနေရာကို ရောက်တော့ ကိုချော ကိုသော့ ရွှေသား လုလင် တို့ကို သတိရမိတယ်။သူတို့သာပါရင် ဒီထက်ပို ပွဲစည်မယ်ထင်တာဘဲ အော် ဖရဲမလေး တို့ မမ တို့ မမာ မဝေ မယ်ပု တို့ကိုလည်း သတိရပါ၏)
3 သာစွလေ သာစွတောင်သမန်းအင်းမြောက်ဘက်က မြင်ကွင်း နေရောင်ခြည် ဦးခိုက်ကော်ရော် ဘုရာလေးပေါ်ကို
4 အဝေးကမြင်ရတဲ့ လက်ပန်ပင်အလှ(ဒီလက်ပန်ပင် အနီးကပ်ပုံလေးတွေက နောက်ပိုစ်တစ်ခုမှာလာမယ်)
5 တောင်သမန်မြောက်ခြမ်းကထန်းညီနောင် အရင်ကရှေတည့်တည့် အခုတော့ ဘေးတိုက်(မတူတဲ့အမြင်နဲ့ကြည့်မိတော့လဲ လှတာပါဘဲ)
6 အမိူက်တော့နည်းနည်းပွနေတယ် ဒါပေမယ့် လှတာကို မကျော်လွားနိုင်ပါဘူး(လူ့လောက ကြီးမှာလဲ ဒီလို့ပါဘဲ မကောင်းတာရှိပေမယ့် ကောင်းတာနဲ့ယှဉ်လိုက်တော့ ကောင်းတာက ပိုများရင် အကောင်းဘက်ရောက်သွားမှာပါဘဲ)
7 စိမ်းနုနဲ့ ပြာနု လွင်ပြင် မြင်သူရင်အေးချမ်းစေပြီး ၀ါရွှေသွေးကတော့ အလွမ်းတွေပေးပြန်ပါတယ်။
8 ဒိလောက်လှပြန်တော့ လဲ ဒိအချိန်လေးကုန်သွားမှာကို နှမျှောမိပါတယ်(အဲဒါ တွက်ကြည့်တော့ အတ္တပါဘဲ ကိုယ့် လိုချင်တာဘဲ သိတာလေ)
9 ပြီးပြည့်စုံသောအလှ (ထန်းပင် ဘုရား ရေပြင်ပေါ် နေအခ)
10 ရှားရှားပါးပါး ရေထဲမှာအရိပ်( ကျနော်အနှစ်သက်ဆုံးရိုက်ချက်လဲဖြစ်ပါတယ်)
11 ဒေါင့်အချိုးအကွေ့လေးကလှတယ်( မထင်မှတ်ဘဲရလာတဲ့ ပုံလေး ဒီလိုဖြစ်ပါစေဆို ရိုက်တာတော့ မဟုတ်ဘူး ပြန်ကြည့်မှ လှတာကို တွေ့လိုက်တာ။လောကကြီးက ဒီလို့ပါဘဲ မရွယ်ဘဲစော်ကဲမင်းဖြစ်ဆိုတာ ဒါမျိုးပေါ့)
12 ဝေလီဝေလင်း ရှုပ်ရှုပ်ထွေးထွေးအလှ
“လေးနှစ်တကြိမ် မှရောက်လာတတ်သော တောင်သမန်အင်းရဲ့ နံနက်ခင်းအလှ”
(29-2-2012)ဆိုတဲ့နေ့က ကမ္ဘာသုံးပြက္ခဒိန်မှာ လေးနှစ်မှ တစ်ကြိမ်သက်ရောက်တဲ့နေ့ထူးလေးပေါ့။
အဲဒီနေ့မနက်က လမ်းလျှောက်ရင်း ကနေ တောင်သမန်ကို မနက်စောစော တစ်ခါမှမသွားဘူးတာသတိရသွားတာနဲ့ရှမ်းကလေးကျွန်းဆက်မသွားဘဲလှည့်ပြန်ခဲ့ပါတယ်.။
ခါတိုင်းဒီလိုဥပုဒ်နေ့ဆိုရင် ရှမ်းလေးကျွန်းဘက်အထိ အတော်ဝေးဝေးလမ်းလျှောက်တတ်ပါတယ်။
ကျနော်ထွက်လာတော့ ခြောက်နာရီ တစ်ဆယ်ငါး။
မမှီမှာစိုးတော့ ဆိုင်ကယ်ကို ဒုန်းမောင်းရပါတော့တယ်။
အစက တွက်ထားတာ တံတားနောက်ခံနဲ့ နေလုံးနီနီရိုက်ချင်တာ။.
အဲဒါနဲ့ မြောက်ဘက်ခြမ်း အင်းအစပ်က ထန်းပင်အောက်မှာ ဆိုင်ကယ်ရပ်။
နောက်အဝေးကလှမ်းမြင်ရတဲ့ လက်ပန်ပင်ကို သွားရိုက်ဘို့ စိတ်ကူးလိုက်
ကိုပေါက်လမ်းသလားရင်းလက်ဆော့ တော့ ရလာတဲ့ အတွေးပါးပါး
water-melon says: ၃ ၄ ၅ ၉ ကိုအကြိုက်ဆုံး လေးပေါက်
လက်ပန်ပင်ကို သွားရိုက်ဘို့ စိတ်ကူးလိုက်တဲ့အခါ……………………ဘာဖြစ်သွားတာလဲလေးပေါက်
နေထွက်လာလို့လား။ သူယောင်မယ်လေးနဲ့တွေ့တာလား Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 11642
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: နောက်နှစ်ရက်လောက်စောင့်လိုက်ရင် အဖြေပေါ်သွားပါမယ် ဖရဲမရေ။
windtalker says: တစ်ပုံ သုံးထောင်
Swal Taw Ywet says: Dear Ko Pauk,
No (2) Central Work Shop ( BEME ).
BEME= Burma army Electrical and Mechanical Engineering force.
Thanks for your photos what made me to remember my child hood.
Thel Nu Aye says: လှလိုက်တာလေးပေါက်ရယ်။ လေးပေါက်ရဲ့ဇွဲကတော့စံပြုစရာပါပဲ။ ဒီလိုရှားပါးတန်ဖိုးရှိတဲ့ပုံတွေအတွက်ကျေးဇူးပါ။
blackchaw says: ပထမဆုံးပုံအတွက် ကျွန်တော် ဖတ်ခဲ့ဘူးတဲ့
ကဗျာဆန်တဲ့ စာသားလေး တစ်ခုနဲ့ ဂုဏ်ပြုချင်ပါတယ်။
marblecommet says: ဒဂဲ့ သဘာဝ
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: လှတဲ့နေရာကို ကံကောင်းထောက်မစွာ ကျနော်ရောက်သွားတာပါဗျာ။
koaung says: ပုံလေးတွေလှပါတယ်ဗျာ
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: စွယ်တော်ရွက်လေးရေ
နောက်ရက်အားရင်တံခွန်တိုင်က တမာတန်းလေးကို သွားပြီးလက်ဆော့ပေးမယ်။
ညီတို့နေခဲ့ဘူးတဲ့ တပ်ထဲက ရေကူးကန်ကိုခဏခဏလာဆော့ဘူးတယ်။
kyeemite says: ကိုစွယ်တောင်္ရွက်ရေ…အံ့သြစရာပါလားဗျာ….ကျွန်တော်လည်း
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: ကျနော်ကတော့ တမာတန်းအ၀င် နေရာလေး သိပ်သဘောကျတာ။
ဒါပေမယ့် မိုးအုံ့နေလို့ ဓါတ်ပုံမရိုက်ခဲ့တာ။
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 152
a me says: အိမ်ကပြောပြောနေတာ ကြားဘူးပေမယ့် အဲ့ဒါက ဘယ်နေရာမှာမှန်းလည်း မသိဘူး မြင်လည်း မမြင်ဘူး ငယ်ငယ်လေးက တောရွာမှာနေခဲ့လို့လား မသိဘူး အခုလိုရန်ကုန်မျာနေရတာကို လုံးဝ သဘောမကျဘူး
တောရွာမျာ ဘယ်အိမ်ပြ ဖြစ်ဖြစ် ကိုအိမ်လိုမျိူးသဘောထားပြိး အတူတူ နေကျ စားကျ သွားကျနဲ့
လုပ်စရာရှိရင်လည်း ၀ိုင်းကူကျနဲ့ ပျော်စရာ အရမ်းကောင်း မိဘ ကို မလွန်ဆန်ရဲလို့ တောရွာကို မပြန်နိုင်ပေမယ့် အရမ်းလွမ်းတယ် ဒီမှာက ဆော့စရာလည်းနေရာလည်း မရှိ အကုန်လုံးက သူဘာသာမဆိုင်ရင်မဆိုင်သလိုပဲနေကျတာ ဟိုမျာတော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးလေ အခုလို ဓာတ်ပုံလေးတွေ ကိုမြင်တော့လည်း ပြန်ချင်တာတော့ ရူးမတက်ပဲ……အဲ့ဒိနေရာကိုလည်း ရောက်ဘူးချင်တယ်
a me says: ဓာတ်ပုံထဲမှာထက် အပြင်ဘ၀ ကိုပိုသဘောကျတယ် တစ်ခါမှ မရောက်ဘူးတဲ့နေရာကို အခုလို ဓာတ်ပုံလေးတွေ ကြည့်လိုက်ရတာ ရောက်သွားသလိုပဲ ကြည်နူးလိုက်တာ ဓာတ်ပုံထဲတောင်
တော်တော်လှတာ အပြင်မှာသာဆိုရင်တော့ ဘယ်လောက်များ…………..
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: မန်းလေးကိုလာခဲ့ ရွာထဲက နန်းမတော်မယ်ပုကို အဖော်ပြုပြီးလိုက်ပို့ပေးမယ်